माछा shemaya - शाही माछा
माछा को विवरण
यो एक gregarious माछा shemaya अक्सिजन धनी र सफा पानी रुचि छ। इरान मा, आफ्नो नाजुक स्वाद लागि शाह-mage (शाही माछा) भनिन्छ। बाह्य को detachment आक्षेप को प्रतिनिधि हो जो धूमिल सम्झाउँछ, तर pectoral पंख मा उच्च शरीर र सुन्तला आधारमा संग माछा, shemaya। शाही माछा कीराहरू, zooplankton र लार्वा खान्छ। shemaya माछा जीवित र अर्ध-फारम मात्र spawning लागि नदी मा बढ्दो खेल्छ। यो माछा को निवास को Azov र कालो र एक tributary छ कैस्पियन समुद्र।
क्रांति अघि यो Dnieper नदी को बैंकहरू मा घर धनी अर्थव्यवस्था मा पोखरी र ponds मा पतला थियो, तर KUBAN बेसिन मा बीसौँ शताब्दीको अर्द्धशतकको मा धेरै माछा Hatcheries, जो उत्पादन सन्तान शाह पर्यावरण जादूगर विकास थाले पत्ता थियो। औसत Shemaah वजन - दुई सय ग्राम, तर त्यहाँ semisotgrammovye उदाहरणहरू पनि छन्। हाम्रो देश मा, राजा-माछा को स्टक एकदम घट्यो। यो कारण पहिले भएको थियो जो, र कुनै पनि स्थापित स्तर बिना यसको अनियन्त्रित माछा मार्ने, थियो। हाल, माछा यस प्रकारको सफलतापूर्वक Stavropol क्षेत्र केही बन्द पानी मा acclimatized। KUBAN र डन को माछा फारमहरु मा पनि यो माछा जवान नस्ल। साथै, अन्य सबै habitats यसको रिजर्व को संरक्षण र संवर्धन लागि कार्य को सक्रियता।
माछा Spawning shemaya शरद ऋतु को अन्त मा धारण। महिलाहरुको मा, वृद्धि तल्लो चिबुक, र पुरुषहरु त्यसपछि गायब जो आफ्नो टाउको मा thorns, उत्पादित गर्दै छन्। यो माछा को एक विशेष सुविधा पानी turbidity र पर्खन्छ यसलाई खाली नभएसम्म जब यो तपाईंको spawn interrupts छ। spawning जमीन मा उपयुक्त Shemaah, सामान्यतया धुलो पछि सुरु हुन्छ। यो रात सम्म जारी छ। सूर्योदय मा निर्माताहरु एउटा रोल फिर्ता। spawn गर्न, प्रत्येक महिला धेरै पुरुषहरु सँगसँगै छ। अन्डा, टाँसिएको खकार ढाकिएको र दृढ पालना चट्टानहरु, माछा जुन को अन्त सम्म अंश मा सुन छोडेपछि कोठामा। , चट्टानको तल प्रायजसो खोंच: भुट्नु, पहिले नै मा एघारौँ दिन, hatched ध्यान गाढा एकांत ठाउँमा लुकाउन। को juveniles तल्लो पुग्छ मा प्रारम्भिक वसन्त गर्न बिस्तारै सार्ने, लेट बरु बसाइँ सर्छन्। प्रजाति को सबै भन्दा एक जीवनकालमा तीन पटक सुन छोडेपछि कोठामा। केवल एक सानो रकम - अप पाँच पल्ट। केही क्षेत्रहरु मा, प्राकृतिक स्थानहरू Shemaah अन्डा बिछाउने बाटो मानव गतिविधिहरु द्वारा अवरुद्ध भइरहेको: कारण जलविद्युत पावर स्टेशन को उपलब्धता धेरै नदीहरू यसको जनसंख्या एक तेज र महत्वपूर्ण गिरावट थियो। तर, प्राकृतिक प्रजनन मा spawning प्रभाव लागि क्षेत्रहरूको मात्र होइन कमी: यो adversely पानी प्रदूषण र नदी स्तर को महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू असर गर्छ।
पक्रने Shemaah मुख्य रूप प्रारम्भिक वसन्त महिनामा हुन्छ। एक सफल माछा मार्ने लागि पूर्वापेक्षा को एक समीर आस्तीन छ। यो माछा प्रयोग चारा र चारा पकड। यो सबै भन्दा राम्रो, यो क्लैम मासु लागि उपयुक्त छ कीमा बनाएको। माछा (सानो), earthworms, bloodworms, Nereis र maggots - shemaya समातिए जो नलिका। एक सहित धेरै भेट्टाउने तरिका फ्लोट रड डुङ्गा बाट। एउटा सजिलो तस्वीर-फिट लामो छडी रूपमा। कुनै कम खतरनाक र वसन्त माछा मार्ने सबै भन्दा राम्रो चारा एक किरा हो जुन बेलामा ताराहरु, मा। ठूलो जनावर Shemaah चारा शिकार किनभने यो माछा एकदम होसियार, यो व्यावहारिक किनारमा नजिकै फँसाना चाहे आहत छैन, किनारमा टाढा हालियो छ।
ट्राउट मा Baubles। सफल माछा मार्ने को रहस्य
को बेलग्रेड क्षेत्रमा Nibble। बेलग्रेड मा मत्स्य पालन
Balda। छैन फिडर
को मिन्स्क क्षेत्रमा शुल्क माछा मार्ने। सबै भन्दा राम्रो कहाँ छ?
पाइक लागि मत्स्य पालन
मानव विकासको चरण
Anapa, Vityazevo: बच्चाहरु संग छुट्टी। होटल समीक्षा, सुविधा र सिफारिसहरू
ब्राउजरमा रूपमा "ओपेरा" विज्ञापन हटाउन? विज्ञापन बिना "ओपेरा"
स्वादिष्ट र असामान्य - खमीर बिना thorns को वाइन
कानुनी संस्कृति को संरचना र कार्य
हरियो सस। सर्वश्रेष्ठ व्यञ्जनहरु
क्ल्याशको टकराव: TX को वितरण 8. विकास युक्तिहरु
कम्प्युटर मार्फत वा यसलाई बिना "एन्ड्रोइड" कसरी फ्लैश गर्न